March 2020 - Ministry of Education | Page 2
Date : 16 March, 2020
March 16, 2020 - 7:17 am | Announcements, Tender
Comments Off on (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်မှ Network ပစ္စည်းများ၊ Software၊ Security Licenseများဝယ်ယူရန် တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
Date : 11 March, 2020
March 11, 2020 - 10:04 pm | Video
March 11, 2020 - 8:22 pm | Album
Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စပိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Emilio De Miguel Calabia နှင့်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် မတ် ၁၁ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စပိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Emilio De Miguel Calabia